Vaovao - Ny fahitana ny teknolojia amin'ny ho avy: ny lojika ho an'ny ankizy dia nanambara fa “hiverina amin'ny ho avy 2 ″ maglev DeLorean fiara fiara
Ny teknolojia ho avy dia fahitana ara-pahitana: ny lojika ho an'ny ankizy dia nanambara fa “miverina amin'ny ho avy 2 ″ maglev DeLorean time car
Andro mahazatra fotsiny ho an'ny olona maro ny androany, saingy andro manandanja ho an'ireo mpankafy ilay sarimihetsika klasika “miverina amin'ny ho avy 2 ″. Androany no andro iverenan'i Marty sy i Dr. Brown, mpiorina ny tantara, amin'ny ho avy. Ho fahatsiarovana an'ity andro ity, vokatra maro isan-karazany mifandraika amin'ilay sarimihetsika no nalefa nifandimby.
Vao tsy ela akory izay, orinasa iray kilalao Hong Kong, antsoina hoe lojika ho an'ny ankizy, no nanambara fiara mpamaky fiara DeLorean miaraka amin'ny fiatoana fampiatoana hamerenana amin'ny laoniny ilay seho sarimihetsika kilasika izay saika hiaingan'ilay fiara mamaky ilay lavaka. Ny vokatra rehetra dia mizara ho fototra sy maodely fiara DeLorean. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny lozisialy levitation magnetika, mihantona ambonin'ny fiara ny fiara. Ny vokatra iray manontolo dia toa sci-fi. Mampalahelo fa ity vokatra ity dia tsy hamidy mandra-pahatongan'ny telovolana fahatelo 2016 amin'ny voalohany. Noho izany, eo amin'ny sehatry ny varotra mialoha ihany izy io ankehitriny. Raha manana fikasana hividy azy ianao dia azonao atao ny mamandraha azy amin'ny tranokala mihetsika ao Taiwan. Na izany aza, ny vidin'ny fivarotana ofisialy dia avo hatrany amin'ny 1600 Hong Kong dolara (sahabo amin'ny 1310 yuan). Tsy maintsy misaina tsara ianao alohan'ny hitetika ny tananao.
Ireo namana izay nahita ny sarimihetsika dia samy mahalala fa ity maodely ity dia mifototra amin'ny maodely DeLorean dmc-12 amin'ilay sarimihetsika faharoa amin'ilay andiany. Nilaza ny tompon'andraikitra fa tsy mivadika 100% amin'ilay horonantsary voalohany amin'ny resaka famokarana. Ny varavarana elatra gull, ny masinina ary ny kodiarana ao anaty vatan-kazo dia natao ho fiainana. Ny refin'ny maodely dia 1:20, ka ny halavan'ny maodely dia 22 cm. Ny vatan'ny fiara dia misy jiro LED 10 mahery, izay afaka mamoaka jiro manjelanjelatra sy mamirapiratra. Aorian'ny fanesorana ny base fampiatoana andriamby sy fanoloana ny modely amin'ny kodiarana mahazatra, dia azo aseho koa ho maodelin'ny fiara mahazatra.
Rohy alohan'ny varotra: mividy sarimiaina
Vidiny ofisialy: 1600 Hong Kong dolara (sahabo amin'ny 1310 yuan)